कसरी मनाइयो जम्मू कश्मीरमा बकर इद ? « Khabarhub
कसरी मनाइयो जम्मू कश्मीरमा बकर इद ?
नयाँ दिल्ली– जम्मू कश्मीरलाई प्रदान गरेको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरेसँगै अपनाइएको उच्च सुरक्षा सतर्कताबीच जम्मु कश्मीरले बकर इद मनाइएको छ ।
बाक्लो सुरक्षा तैनाथीकाबीच कश्मीरमा रहेका मुस्लिम धर्मावालम्वीले इद मनाएका छन् । सुरक्षाकर्मीले एक्लै वा दुई जनासम्मलाई मस्जिद जान अनुमति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएका कारण त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरुलाई एकै ठाउँमा भेला हुन दिइएको छैन ।
त्यस्तै, सानो सङ्ख्यामा मात्र मानिसहरुलाई मस्जिदमा प्रार्थाना गर्न दिइएका कारण धेरैजसो मानिसहरुले घरमै इद मनाएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, त्यहाँ सञ्चार सेवा बन्द रहेका कारण त्यहाँको वास्तविक घटनाको यथार्थ जानकारी आउन सकेको छैन । तैपनि स्थानीय श्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीले जनाएअनुसार त्यहाँका सडक अझै पनि सुनसान छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरुलाई एकै स्थानमा भेला हुन दिइएको छैन ।
भारत सरकारले राज्यका अधिकांश मस्जिद खुला रहेपनि सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण केही मस्जिदहरु भने बन्द गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै इदको प्रार्थाना पछि राज्यका केही मस्जिदमा भारतविरोधी नारा लगाइएको तर, अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको बताइएको छ ।
केही दिनअघि बेलायती प्रसारण संस्था बीबीसीले कश्मीरमा सयौं मानिसहरुले सरकारविरोधी प्रदर्शन गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो ।